Zvinoenderana neKGI iyo mbiri kamera ichagara yakasarudzika kune iyo Plus modhi | IPhone nhau
Musi waGunyana 7, iyo Cupertino-based kambani yakasimbisa runyerekupe rweveruzhinji nezve iyo mbiri kamera yeiyo iPhone 7 Plus, kamera inotibvumidza isu kutora mifananidzo sekunge yaive reflex kamera, zviri pachena kuchengetedza madaro. Sekureva kwemuongorori weKGI Securities Ming-Chi Kuo, iyo mbiri kamera yeMono modhi icharamba yakasarudzika kune iyi modhi uye kambani haina kufunga, zvirinani munguva pfupi iri kutevera, yekushandisa tekinoroji iyi mune yakajairwa modhi, iyo 4,7 inches. Kubva kuvhurwa kwemhando nyowani dze iPhone ine 4,7 uye 5,5-inch screen, Apple yakachengetedza musiyano wakakosha pakati pemhando mbiri idzi, kunyanya muchikamu chekhamera.
Sezvo isu tichigona kuverenga muMacRumors, uko zvakataurwa izvi kubva kumuongorori weKGI zvakatumirwa
Ipo iyo nyowani kamera pane iyo Plus modhi inzira inokwezva yekukwezva vafotori vehunyanzvi, iyo mbiri kamera pane iyo iPhone 7 Plus haizoiti iyo kune yepasi modhi. Pamwe chete nemutengo wekhamera, inofungidzirwa pakati pemadhora makumi matatu nemakumi mana emadhora, Apple haioni kukosha kwekushandisa tekinoroji yeiyo Plus modhi mune mashoma zvigadzirwa, saka rinotevera gore, apo gore regumi rekutanga kweiyo yekutanga iPhone ichave ichipembererwa., iyo mbiri kamera icharamba yakasarudzika kune iyo Plus modhi.
Uyezve, inotaura kuti iyo telephoto lens ichagamuchirawo Optical stabilizer. Parizvino chete yakafara-kona kamera ine ino optical kugadzikana tekinoroji. Ming-Chi Kuo ane mugove wakaenzana webudiriro uye kukundikana. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti mazuva mashoma isati yatanga iyo iPhone 7, Kuo akazivisa dzinenge dzese nhau dzakasimbiswa mukuburitswa kwaGunyana 7. Nekudaro, kana zvasvika pakuita fungidziro yenguva refu, Kuo anga asiri akabudirira kana zvasvika pakugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Zvinoenderana neKGI iyo mbiri kamera ichagara yakasarudzika kune iyo Plus modhi
Kuora mwoyo kwakakwana. Kana ndikatenga iyo 4,7 ″ modhi ndeye yemubvunzo wekunyaradza uye saizi. HAPANA nekuti iwe unoda kushandisa shoma kana uine mashoma maficha. Vari kundimanikidza kushandisa foni hombe yandisingade.
Ndege dzinobva kutenderera pasirese dzinobatana kurwisa iyo Galaxy Note 7